လက်ဖက်ရည် သောက်တတ်သူတိုင်း ကျော်မသွားပဲကြည့်သွားစေချင်
လက်ဖက်ရည် သောက်တတ်သူတိုင်း ကျော်မသွားပဲကြည့်သွားစေချင် လက်ဖက်ရည် အချိုသောက်ရင်ဖြင့် အသက်တွေ အမှန်ပျောက်ကြမှာမို့ ဆင်ခြင်ကြဖို့ ကြည့်စေချင်(လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေက ပြန်သိမ်းလာတဲ့ အချိုခြောက် အဟောင်းတွေကို နေလှမ်း လွှစာမှုန့်ရော အရောင်ဆိုး အနံ့ဖြန်းပြီး ပြန်ရောင်းကြပါသည်) လက်ဖက် အစို နဲ့ သုတ်ထားတဲ့ လက်ဖက်သုတ်ရယ် .. လက်ဖက်ခြောက်ခပ်ထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်း ရယ် .. နှပ်ပြီးဖျော်ထားတယ်ဆိုတဲ့ လက်ဖက်ရည်ချိုရယ် ဘာလို့ အရောင်၊ အနံ့၊ အရသာ မတူကြတာလဲလို့ FDA […]
သင့်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝလာမလားဆိုတာ အဖြေထုတ်ပေးမယ့် ကတ်ဗေဒင်
သင့်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝလာမလားဆိုတာ အဖြေထုတ်ပေးမယ့် ကတ်ဗေဒင် ကတ်နံပါတ် (၁) သင်သာ ကတ်နံပါတ် (၁) ကို ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့လတ်တလော အိပ်မက်ဆန္ဒတွေကို ပြည့်ဝလာဖို့ အလားအလာတွေ များနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်နည်းနည်းတော့ စောင့်ရမှာမှာဖြစ်ပြီး လောလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ လောမိလိုက်တာနဲ့ အရာအားလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တာမို့ စိတ်ရှည်ဖို့သာ လိုပါတယ်။ သင်မမျှော်လင့်ထားဆုံးအချိန်မှာ သင့်ဆန္ဒတွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကတ်နံပါတ် (၂) သင်သာ ကတ်နံပါတ် (၂)ကို ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင် သင်ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ […]
ကောင်မလေးကလည်း အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုနေတာပေါ့ ! ”ဦးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ခုမီးက…ခလေးရှိသေးတယ်” ဘောစိ ဦးလေးကြီးလည်း” မီးကိုသာရမယ်ဆို ဘယ်ပုဒ်မတွေမဆို ငွေနဲ့ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း နွားအို မြက်နုကြိုက်တာ အစဉ်အလာဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုကာ ဒူးထောက်၍ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေပြန်တယ် ! ကောင်မလေးကလည်း “ငရဲတွေကြီးပါ့မယ် ဦးရယ်…မီးက တကယ် ခလေးရှိပါ သေးတယ်”ဆိုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုနေတော့… ဘောစိဦးလေးကြီးလည်း …“မီးလေးရေ …ရှေ့ရေးစဉ်းစားလေ” ..ဆိုပြီး အမြဲ နားပူနားစာလုပ်နေတယ် ! နောက်ဆုံးတော့ မီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလည်း ဘောစိဦးလေးကို….မငြင်းသာ မလှုပ်သာပဲ […]
လူသိ အလွန်နည်းနေသေးတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ရွှေဝင် ငွေဝင် နိမိတ်များအကြောင်း
လူသိ အလွန်နည်းနေသေးတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ရွှေဝင် ငွေဝင် နိမိတ်များအကြောင်း လူသိ အလွန်နည်းနေသေးတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ရွှေဝင်/ငွေဝင် နိမိတ်များအကြောင်းကို စာဖတ်ပရိသတ်များ သိရှိစေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)အိမ်ထဲ ဖားခုန်ဝင် တွေ့ရှိခဲ့မူ ငွေရအံ့။ ၂။ အိမ်ထဲ ပိတုန်းဝင်မူ တွေ့ရှိခဲ့ပါက ဧည့်သည် လာအံ့။ (၃) အိမ်ထဲ ဓါးခုတ်ကောင်ဝင်မူ တွေ့ရှိခဲ့ပါက ပေးကမ်းမည့် ဧည့်သည်လာအံ့။ (၄)အလံတင်ရမူ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်အံ့။ ၅။ တင်လိုက်သည့်အလံ […]
ခြေထောက်ထုံကျဉ်၊ ဆံပင်တွေကျွတ်၊ မျက်မှန်တွေတပ်နေရလို့ စိတ်ညစ်နေသူများ အချိန်မှန် ဆားနင်း ရှယ်ပြီးသိမ်းထားသင့်တဲ့ဆေးနည်းလေးပါ။ ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ် ယနေ့ည လက်တွေ့စမ်းကြည့်တာ ဆား (၅၀ )သားလောက် ရေနွေးနဲ့ခြေထောက်ကို နာရီဝက်လောက်စိမ်ထားပြီး ခြေဖဝါးကို ဆားနဲ့ပွတ်တာ ပြီးတော့ပြောင်အောင်သဘက်နှင့်သုတ်လိုက်တယ် ဒူးအောက်ကနေ ရေနွေးလေးနဲ့ လောင်းပြီးဆေးလည်းရပါတယ် ကိုယ်မှာချွေးများထွက်လာပြီး ညောင်းတာကိုက်တာပေါ့သွားတယ် အပူလည်းတော်တော်ထွက်တယ် ဒီနည်းတိုင်း သုံးရက်လောက် လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ညောင်းတာကိုက်တာ အပူများတာ ကျန်တဲ့ရောဂါတစ်ချို့ သက်သာလာမှာသေချာတယ် ထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူများ စမ်းကြည့်ပါ အကျိုးမယုတ်ပါဘူး […]
(၆)မိနစ်ရင်းပြီး ပေါင်နဲ့ခြေသလုံးကို ကျန်းမာ သွယ်လျလှပ‌ စေဖို့
(၆)မိနစ်ရင်းပြီး ပေါင်နဲ့ခြေသလုံးကို ကျန်းမာ သွယ်လျလှပ‌ စေဖို့ ယနေ့ခေတ်မှာ ဖက်ရှင်အရရော ကျန်းမာရေးအရရော သွယ်လျပြီးကျန်းမာတဲ့ ခြေထောက်လေးက အရမ်းကိုလိုအပ်ပါတယ်နော်။ခြေတံလေးတွေ သွယ်လျနေရင်တော့ ရှိရင်းစွဲအရပ်ထက် ပိုရှည်သယောင် ထင်ရပြီး ဘောင်းဘီ၊ စကတ် ဘာဝတ်ဝတ် အဆင်ပြေကြည့်ကောင်းပါတယ်။အဲတာကြောင့် အရမ်းထိရောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်မျိုးကို (၁)မိနှစ်လုပ်ပေးပါ။ ၆ခုဆိုတော့ (၆)မိနှစ်ပဲကြာမှာပါ။ လှပဖို့အတွက် ၆မိနှစ်ကိုရင်းသင့်နယ်လို့ထင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း (၁) ခြေထောက်‌က်ု ပုခုံးအကျယ် ခွာရပ်ပါ။ လက်က ပုံပါအနိုင်းထားပါ။ ပြီးလျှင် […]
ခါးသိမ်ပြီးကောက်ကြောင်းလှဖို့ အလွယ်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းများ
ခါးသိမ်ပြီးကောက်ကြောင်းလှဖို့ အလွယ်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းများ ခါးလေးသိမ်ပြီး ကောက်ကြောင်းလှချင်တဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် အလွယ်ကူအထိရောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများ Gym ဆော့ဖို့လည်း အချိန်မပေးနိုင်၊ အပင်ပန်းလည်း အရမး်မခံနိုင်တဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် ခါးလေးတွေကို သိမ်ပြီးကောက်ကြောင်းလှသွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ] ဘာကိရိယာမှ မလိုတာကြောင့် အိပ်မှာနေရင်းနဲ့ကို လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ် လေ့ကျင့်ခန်း (၁) ဘေးတစ်စောငး်အနေအထားနဲ့ ဒူးတစ်ဖက်၊ လက်တစ်ဖက်တို့ကို အားပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ လက်နဲ့ ခြေထောက်ကိုထိထိပြီး ဆန့်လိုက်၊ ထိလိုက်လုပ်ပေးရမှာပါ။ တစ်ဖက်ကို […]
ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ချက်တဲ့ ထမင်းကို မသိုးပဲ ကြာရှည် အထားခံအောင် လုပ်နည်း
ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ချက်တဲ့ ထမင်းကို မသိုးပဲ ကြာရှည် အထားခံအောင် လုပ်နည်း ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ချက်တိုင်း သိုးလွယ်လို့ မသိုးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီး မေးတာ‌တွေ့လို့.. ကိုယ့်အတွေ့အကြုံလေးကို မျှဝေပေးပါရစေ.. ကိုယ်လည်းအဲ့ဒုက္ခကို တော်တော်ခံစားခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲဆို မနက်ပိုင်းချက်ထားတဲ့ထမင်းကို ညနေမမှောင်ခင် အပြေအလွှားစားမှ မှီတယ်.. မဟုတ်ရင် စားခါနီးကျ ထမင်းကသိုးရော.. အဲ့လိုဖြစ်ပေါင်းများလို့ ခေါင်းဆွဲပြုတ်နဲ့ ညားရတာအခါခါပါပဲ.. ထမင်းမသိုးဖို့ဆိုရင် ကိုယ်သိသလောက်ကတော့ ဆန်ဆေးရင် ဆန်ကို သေချာပြောင်အောင်ဆေးရမယ်.. ပြီးရင်ထည့်ချက်မယ့်ရေကလည်း သန့်ရမယ်.. ပြီးရင် […]
လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီး ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းတဲ့ တင်းတိပ်ပျောက်ဆေး တင်းတိပ်ဆိုတာ မျက်နှာ အသားကို နေပူလောင်တာ၊မီးပူမိတာက စတာပါ “..” မီးအပူနဲ့ ချက်ရ ၊ ပြုတ်ရတာတွေလည်းပါတာပေါ့” သုံးရမှာက အိမ်မှာ ငွေလည်းမကုန် ၊ လွယ်လွယ်နဲ့ ရတဲ့မီးဖိုချောင်ထဲက မြန်မာ့ တိုင်းရင်းဆေး ပစ္စည်း မကျည်းသီးမှည့် ပါဘဲ ။ ကျွန်တော် အဲဒီနည်းကို အမကြီးတွေ ၊ ညီမတွေကို ပေးပြီး စမ်းသပ်ခိုင်းတာ ဆယ်ရက် – ဆယ်ငါးရက်အတွင်း […]